Ngiyabonga, uDorion Carroll noTechnorati! | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 30, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Hawu indida! Ngisanda kuqeda ukubhala okuthunyelwe izolo ku- isimo sokubeka uphawu kophawu nokuthi isisebenzi ngasinye singukhiye kanjani emizamweni yakho yokwenza uphawu. Cishe ezinyangeni eziyi-6 ezedlule benginenkinga lapho Technorati ibingavuseleli izibalo zami. Ngibhalele i-imeyili ukusekelwa kwabo futhi kungakapheli isonto noma kunjalo, ngithole impendulo enomusa nesibuyekezo sokuthi inkinga ilungisiwe.
Lokho kwaba umbono omuhle wokuqala. Angiyikhokhi i-Technorati ngakho-ke bengingalindele mpendulo noma yini ezobuya. Kusukela lapho, bengingumlandeli futhi bengilokhu ngithola kancane ezinye izindlela ezinhle zokusebenzisa i-Technorati ukuthuthukisa ikhwalithi yebhulogi yami nokukala ukukhula, igunya, nokuma kwebhulogi yami.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, mina ithunyelwe kumakhono okusesha ibhulogi kaTechnorati. Omunye wabafundi bebhulogi lami, Vince Runza, uphawule ngalokhu okuthunyelwe nokuthi ubenezinkinga kanjani ngeTechnorati ebuyekeza ibhulogi yakhe. Ngomlingo we-blogosphere futhi njengomsebenzi weTechnorati UDorion Carroll ukubeka, "abantu, ukukhuluma nabantu, kanye ne-imeyili encane (ezenzakalelayo ngamazwana ebhulogi)"… umyalezo wafika kuDorion owaqinisekisa ukuthi udaba lulungiswa ngokushesha.
Isiqephu sonke besingakwazi ukudweba isithombe esicacile ngokuthunyelwe kwami. Ngaphambi kwalolu daba, okuwukuphela 'kokubuka' komkhiqizo weTechnorati kwakuyisayithi labo, ilogo, nombala oluhlaza okotshani:
Manje ngiyazi ukuthi kunabasebenzi abanonembeza ngemuva kweTechnorati abanendaba nokuthi abantu bathini ngenkampani yabo; yingakho, uphawu lwabo. Into elula bekungaba ngabasebenzi ukuthi bamane bakushaye indiva ukungena bese 'bevumela ukwesekwa bakuphathe'. Akukona okwenzekile futhi kukhuluma kabanzi ngophawu lweTechnorati. ITechnorati ingaphezu kwe- “Injini Yokucinga”, iyinkampani ezama ukusiza ama-blogger ukuthi abe ngcono.
Ngiyabonga, uDorion. Ngiyabonga, Technorati.
I-Brand Aid: Umbuso Wokuphawula
Dec 30, 2006 ngo-10: 56 PM
Yizwa, uzwe! Kwangimangaza indlela impendulo eshesha ngayo. Ngimthembisile, kubhulogi yakhe, ukuthi angazukumkhathaza nganoma yiziphi izinkinga ezizayo zokusekelwa kwezobuchwepheshe. Umhlaba awugcwele nje kuphela, uyashesha futhi!